NY RÀN'I JESOA KRISTY TOMPO
I Jesoa Kristy Tompo, ilay Zanaka tokan'ny Ray ;
Tonga teto an-tany, mba hamonjy ny mpanota.
Nanetry tena, nanaiky, nidina ho nateraka indray,
Tao an-tranon'omby iray, izay hita efa tena tonta.
I Jesoa Kristy Tompo, nanao fahagagana maro ;
Namonjena ireo olona, izay hita tena sahirana.
Nampisehoana eo imaso, ary koa nampahatsiaro,
Ny fitiavany tsisy fetra, feno tsiky sady mirana.
I Jesoa Kristy Tompo, tsy nandà ny nombohana,
Teo amin'ny hazo fijaliana, na dia tsy meloka aza.
Fotoana iray nanan-tantara, ary koa nanombohana,
Ny namonjena izao tontolo izao, araka ny voalaza.
I Jesoa Kristy Tompo, nahafoy nandatsaka ny ràny,
Hanavotana antsika, eto amin'ny tany fandalovana ;
Mba ho mpandova ny paradisa, any an-danitra any,
Na dia tsy mendrika aza, noho ny tarazo fahalovana.
I Jesoa Kristy Tompo, ilay tena feno fanetren-tena,
Na dia Mpanjakan'ny mpanjaka aza, hoy ny baiboly,
Misy sahy manevateva, amin'ny fihetsika mahonena.
Fihetsika mendrika ny helo, tena fihetsika devoly.
I Jesoa KristyTompo, hany làlana tokan'ny famonjena ;
Manelanelana mampita, any amin'ny Ray ambony any.
Raiso amin'ny fo madio, sy amin'ny fanetren-tena ;
Satria noho ny fitiavany tsisy fetra, nalatsany ny ràny.
Ka meteza hiova, hadio, ho isan'ny nateraka indray ;
Ao anatin'ireo zanaka, hanaraka an'i Jesoa Tompo,
Tsy ny anio ihany, na ny ampitso, fa koa mandrakizay.
Mba tsy very ny ràny, raha ny rehetra no manompo.
Ny ràn'i Jesoa Kristy, ra ̀ ny fanantenan'ny tsirairay ;
Ny ràn'i Jesoa Tompo, rà miaro amin'ny zava-mahory ;
Ny ràn'i Jesoa Kristy, rà ny fiainana mandrakizay ;
Ny ràn'i Jesoa Tompo, rà sy aina, mandemy ny devoly.
Ny ràn'i Jesoa Kristy, rà ny famelana ny ratsy efa vita ;
Ny ràn'i Jesoa Tompo, rà ny soa sy ny tsara rehetra ;
Ny ràn'i Jesoa Kristy, rà mandresy ny fiainan-tsy hita ;
Ny ràn'i Jesoa Tompo, rà mamonjy ny olon-drehetra.